Tsy tao anatin’ilay fiaramanidina Rtoa Lalao Ravalomanana – MyDago.com aime Madagascar
Tonga teo Ivato tamin’ny folo sy sasany alina teo ilay fiara-manidina avy any Bangkok, tonga tamin’izany ireo polisy mirahalahy nitondra ny vadin’ny filoha omaly tsy tao anatin’ny avion kosa Rtoa Lalao Ravalomanana.
Auteur Solo Razafy*Publié le 28 juillet 2012 Catégories Politique
26 réflexions sur « Tsy tao anatin’ilay fiaramanidina Rtoa Lalao Ravalomanana »
28 juillet 2012 à 20 h 58 min
Rah vô ilazana izahay de tonga fôna zay ehhhhhh, miandry zay Neny ahhh, Miandry zay Dada ahhhhhhh
Zaay tsy kivy ehhhh, Hody aloha zany androany, de mety ho rahoviana zany? ilazao iany izahay raha vao misy vao² tokony ho tenenina ehhhhhh, izay mahazo vao²
Mitohy ny tantara hoy aho !
Au lieu d’arrondir les angles, la HAT nous fait preuve de sa nullité dans tous les domaines ; malheureusement, au détriment du peuple malgache !
Indrisy !! « Je ne serai pas plus nul que le président Ravalomanana » ve izao ?
mino sy manantena isika fa ho avy tsy ho ela izy mianakavy. Mirary soa sy faharetana kely ho azy ireo .
Midera ireto vahoaka teny Magro androanay koa. Mamy hoditra ny olo-mendrika indrindra rehefa nahita ny bibidia nateraky ny alika.
tokony Mitohy ny firaisankina fa tsy ho lasa lavitra akory ny tsy valahara rehetra.
Nisy mutinerie indray hono tao amin’ny BANI io hariva io. Asa na marina …
olona alika tsy fahita eto an-tany ilay dj sy ny tariny. Mitapy.
Tsy ho tratra ny aloka angaha izy mianakavy ?
Manomboka izao dia samia manozona ny foza indrindra i dj mianakavy, isan-andro, isan’ora. izay ozona mavesatra indrindra.
Tandremo fa ny mafia bulgare, mazan-doha lavitra noho ny russes sy siciliens ! Halàza be any Bulgarie izany atao hoe Rajoelina izany ! Aza mba mifanena amin’ny mpaka kitay ihany, indray andro any, ary mbola ho hitan’ireo bulgare ireo izany Sté DOLE-IMPEX nosokafana ao Nanterre izany, indrindra moa fa ireo tompony !!
Aza manody, fa aleho hàlan’Andriana toa izay hàlam-bahoaka, indrindra fa bulgare !
milaza tsy ho tratra ny haloka hoy aho, rehefa nandra dia miha nandra hisan’andro ka lasa tondro molotra ary miafara any amin’ny FAHAVEREZANA. Manimba tena, ho hafa -baraka, ary hizaka ny ozona hataoko isan’andro
Hihinana ny am … ny ireo,
La terre est boribory et pétity ê ! Izay fotsiny, na dia efa nihevitra ny hitsaoka any Sina aza izy mianakavy ! Ny alahelon’Ingahy Ravalomanana mety ho zakan’ny tenany sy ny sainy satria olona mpivavaka ilay rangahy, fa ny vahoaka ?? Aoka fotsiny, raha ny habibiana hitan-dry zareo isan’andro izao no tanisaina !
Tsy te ho eo amin’ny toeran-dry zareo aho !
Fa dia mihevitra koa ve anefa ireto foza fa ho afa-maina @’izao hataony izao e???
tsy mila fanozonana akory fa izy mianakavy ihany dia efa manozona ny tenany sy ny
taranaka fara-mandimbiny, ny hatao ihany no miverina koa samia velon’aina ahita ny farany e!!
Izaho mahatoky an’i Zanahary fa tsy misy hiala menaka eo.
I bomba sy i zanakisoa eo hiaro azy Kintana a!dia ny mpikopaka lalitra , ny alika voky taolana,
ny mpisolelaka, sns… Obama aza lazainy fa tsy hatahorany koh!!izay no mba nataon’ireto vatatay
fa notsipazana taolana kely tery Ambohijatovo.
Aza amelana jreo karana mpanjanaka fa ireo no mitady handidy an’i Gasikara eo, ireo reraka sy
mahantra avy any aminy any ireo, tsy any @ taniny any izy manjakazaka fa???
28 juillet 2012 à 22 h 42 min
Any angaha no nitaomana ireo harena nangalarina hono???
mbola tsy hivadian’i kelimaso in-dray mandeha vao gaga??
efa mangitakitaka mihintsy aho izany marina a!!tany masina io oah!!izay manao ratsy ao no VIZANA.
Ny aina no mahatezà ahita ny farany e!!!homba antsika Andria anitra!!aza matahotra hoy dada!!
28 juillet 2012 à 22 h 45 min
Hatambatra ny ozona …dia karakaraina izay mikasika ireto « jiolahy mianakavy » na Nanterre na izay misy fofompofom-poza rehetra e!
Voa maika ho rombotra ry zareo raha voaparitantsika erantany daholo ny ratsy rehetra vitan’ireo voavidiny frantsay ireo e!
Mba alefa koa izay fitoriana andry zareo @ fitsarana avo/Europe na International!
Ireo karana miseho milay dia ataovy tsy mahita sambos intsony raha tsy mifona-mivalo @ malagasy fa ela loatra izay nanalikainy ny gasy izay.
Raha misy fotoana ka mbola miverina ny documentaire/TV-LCP momba « Françafrique 2ème partie » dia tsara hadika sy alefa ho jereny ny eny Magro e!
28 juillet 2012 à 22 h 49 min
Ary mahay teny sinoa angaha hono ireto izy??
f’angaha tsy any la frantsa ???i sarkô aza moa andeha handositra any
Canada koh!!tsy hita e!!izay voa manoddina, fa izay voany kosa aloha efa voa mafy, hifandimbiasana
ilay toerana fa atao ahoana e!!
Ny mampalahelo anie dia misy olona akaiky ny foza nefa tsy mankasitraka velively ny
asaratsin’izy ireo ka sao hianjeran’ny alahelom-bahoaka koa e!!fa amiko manokana aloha
rehefa nisafidy ny lalan-dratsiny izy na olona akaiky ahy azy dia tsy musy hiasako loha aminy mihintsy na ho maty
an-tantatra any aza ry zareo mianakavy, ampy ahy izao fahavoazn’ny fireneko izao , misy kosa indray aloha ny efa
mba tonga saina fa ny sasany dia tena mamono heritreritra fotsiny izao, koa azy ny azy .
28 juillet 2012 à 23 h 47 min
Mahatoky ve aloha ny rehetra fa tena pôlisy ireo nanatitra an’i neny ireo
ary pôlisy avy aiza??iza no naniraka azy???afaka harahana tsara ve hoe
aiza marina no raharaha hiandraketan’izy ireo???fa tsy ho afa-maina eo izany pôlisim-bohitra izany.
Amboary ary arao maso tsara ray olona a!!arao akaiky hoe: iza marina no maniraka azy ireo???
29 juillet 2012 à 7 h 20 min
29 juillet 2012 à 9 h 09 min
Mba takatry ilay foza maimbo, tsy maty voalavo an-kibo satria tarana-boalavo mpitondra pesta sy loza ho an’ny firenena amin’izay ve, fa hàlam-bahoaka ry zareo foza ?
Ho an’ilay nanimbazimba anaram-panjàka, ( tarikin’ny mpanenjika, mpamono ny mpiray tanindrazan’aminy, ary mpanapoaka tetezana) ary voadaka teo io !
Mety tsara ny nataonareo ry MyDago !
Mahamenatra ilay pseudo hoe « Andrianampoinimerina » !! Anarana hafa mba hoentina ry zandry a !!Manala baraka ny sasany !
Misaotra an’i Bilboquet e!
Manalabaraka tokoa moa sy mitory ny tsy fahaizana ny tantara malagasy ary fomban-drazana:
-Misy hasina daholo izay tontolo nihainany ntaolo ka tandremo ny faniratsirana izany @ ity fampiasana anarana malaza ity ry mpisoloko sy tsy matahotody an!
Karazan’olona toy itony mpisoloko itony no mora foana hampiasainy frantsay sy ny milices-ny mba hamita asa mamoafady.
Niverina ato indray izany ilay mpisoloky !
Angalarina daholo izay azo angalarina, fahefàna, na anaram-panjàka na satro-boninahitra ! Entin’ny fitsiriritana sy ny fialonana !
Tena nitovy mihintsy ny hevin-tsika ry randry ! Iza moa no ho tahafiny fa tsy ilay misoloky ho mpitondra firenena ?
Mazotoa aloha ianareo miarak’aminy eo, fa handeha hipikinika miaraka amin’ny tary mpanohana ny ara-dalàna ihany izahay !
Efa vonona ny ankizy !
29 juillet 2012 à 14 h 18 min
Aingakaingana fa lasa ny olona!!!
aza korotaninao @izany tantara mampanonofy ratsy izany ny ankizy fa efa te hidodo ry poina a!
Rabe vôpl nanova pseudo andrianampoinimerina foza mitampina tay ny mason’io!
Marary fo @’izany eo!efa hita fa olona efa Mivika!!
i Kotozafy ihany no Lekisisy oah!ianareo ve ahoana e!!
Précédent Article précédent : Antson’ny filoha RAVALOMANANA
Suivant Article suivant : TIM ANTANANARIVO RENIVOHITRA : MANAMELOKA NY FIHETSIKY NY FAT